Musharixiin sheegay in ay kalsoonida kala laabteen Guddiga doorashada Jubbaland.
Qaar ka mid Musharixiinta u taagan qabashada Madaxweynaha Jubbaland oo xalay kulan ku yeeshay Magaaladda Kismaayo ee Xarunta Gobolaka Jubbada Hoose ayaa sheegay in ay kalsoonida kala laabteen Godiga Madaxa banaan ee Doorashooyinka Jubbaland.
Murashariinta ayaa Gudiga doorashooyinka ku eedeeyay in ay hal musharax u adeegayaan iska markaana ay kalsoonida kala laabteen Godiga Doorashooyinka Jubbaland.
Musharixiinta ayaa sheegay in gebi ahaanba aysan kalsooni ku qabin Guddiga doorashada Jubbaland,isla markaana ay yihiin kuwo ol ole u wada Madaxweynaha Jubbaland ee xilkiisu sii dhamaanayo Axmed Maxamed Islaam Madoobe.
Masuuliyiinta Xildoonka ah ee ku shiray Kismaayo ayaa ugu baaqay in ay iscalisaan Gudiga Doorashooyinka Jubbaland maadaaba sida ay sheegeen insan u shaqaynayn si loo simanyahey.
Ciidanka amaanka ayay sidoo kale ku eedeeyeen in ay u shaqaynayaan Xukumada Taladda Jubbaland heysa oo aysan u dhexayn Bulsheda, Masharaxiinta Xildoonka ah ee jooga Kismaayo.
Dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo Beesha Caalamka ayay ugu baaqeen in ay soo faragaliyaan arimaha Doorashooyinka Jubbaland oo ay sheegeen in uu iska wata hal Musharax.
Waxaa ay ku eedeeyeen guddiga doorashada Jubbaland in ay hareer mareen habraaca doorashada,isla markaan aay waajib aheyd in ay kor joogto ka noqdaan waxa ka socda Kismaayo Xubno ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Hadalka Murasharixiinta ayaa imaanaya saacado uun ka dib markii guddiga doorashadadaJubbaland ay soo saareen shuruudo la hor-dhigay Musharixiinta Xilka Madaxweynaha Jubbaland.